Forum serasera malagasy Raison de vivre: resaka filozofika - Dinika forum.serasera.org
Raison de vivre: resaka filozofika
Fitohizan'ny hafatra : Raison de vivre: resaka filozofika
Valiny : 97
bandykely - 09/07/2013 09:58
Manao ahoana daholo isika mpisera,
Tiako mba hifanakolozana aminao ny fanontaniana mipetraka amiko amin'izao fotoana izao: inona no atao hoe sambatra amin'ny fiainana?
Manan-janaka tafita ve, mino an'Andriamanitra ve, manam-bola be ve, manam-pitiavana ve, mitsinjo ny hafa ve,...sa inona?
Inoako fa ny tanjon'ny tsirairay eo amin'ny fiainana dia ny hiaina tsaratsara kokoa hatrany. Fa inona ilay tsara?
Nehemiah - 09/07/2013 10:21
Inona no tombontsoa ho azonao raha azonao izao tontolo izao nefa ho very ny ainao ? Zava-poana ny zava-drehetra raha tsy miray @'Ilay nahary anao ianao.
Inona moa no tena dikan'ny hoe "Omeko anareo ny fiadanana, tsy omeko anareo tahaky ny fanomezan'izao tontolo izao" ? Raha andrasanao ho tsara ny toe-javatra voa sambatra dia hijaly ianao @'ity fiainana ity, fa raha mahazo vahatra @ Kristy kosa dia ho sambatra foana ianao na dia ao anatin'ny tafio-drivotra ratsy indrindra aza.
hery - 09/07/2013 11:05
Inona no tombontsoa ho azonao raha azonao izao tontolo izao nefa ho very ny ainao ?
Ary ny olona lava andro iainana nefa nijaly foana?
bor2lais - 09/07/2013 12:14
Mitovy ve ny "aina" resahinareo izany ?
bandykely - 09/07/2013 12:36
Izaho manokana aloha dia tsy mino hoe ampy hahasambatra ny finoana an'ilay nahary. Lazaina fa sedra ny fijaliana, ka ianao mino io ve na mijaly foana amin'ny andavanandronao dia mahatsiaro sambatra ihany ?
booboo - 09/07/2013 13:04
Ny fahaizana mankafy ny pitsopitson-draha omen'ny Fiainana @ fotoana Ankehitriny sy @ toerana Eto ny ahy hatreto fa mety hiova... na tsia angamba tsy haiko. Ouz maître Oogway izay " Hier, c’est déjà de l’histoire. Demain est un mystère. Mais aujourd’hui est un cadeau, C'est pourquoi nous le nommons le Présent " , t@ Kung Fu Panda io :-D
5laody - 09/07/2013 14:50
"Le bonheur c'est d'apprecier le voyage tout en ne perdant pas sa destination de vue."
booboo>> mahafinaritra ahy le filozofia bob l'eponge sy Kf panda
bandykely - 09/07/2013 14:58
Ny ahy indray ny bonheur dia manana vady tiana sady tia ahy.
Nehemiah - 09/07/2013 15:05
Bandykely >> Izy io anie tsy tahaky ny fidorohana zava-mahadomelina ka mitady an'izay fomba rehetra ialàna @ hamafin'ny zava-misy (réalité) e. Nanome toky ahy Andriamanitra fa tsy misy inona na inona tsy vitany @ alalan'ny zava-boary mahatalanjona noforoniny. Nanome toky ahy Izy fa ho arovany sy ho tahiany mandrakariva satria na dia ny Zanany Lahitokana aza nomeny ho antsika. Ka tsy hisalasala intsony mihitsy aho @ ho avy. Izay izao dia efa zavatra 1 izay dia ny fahafahàna @'izay fangejàna izay.
Kanefa tsy vita an'izay fa manana privilèges maro be ianao rehefa zanak'Andriamanitra. Izany zanak'Andriamanitra izany anie ka zanaky ny Mpanjakan'ny voary sy Mpamorona an'izao tontolo izao miaraka @'ireny galaksia tsy tambo isaina (ara-bakiteny) ireny e. Angamba efa mahalala ianao ny momba ny fahafana @ ota sy ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalàna an'Andriamanitra.
Satria raha mahatsikaritra ianao, na hendry toy inona ny olona 1 aza dia tsy mahafaka ny olan'ny ota nataony. Izay mihitsy no tantarain'i Sôlômôna @ Mpitoriteny : nanana an'izay rehetra mety irin'ny fony izy nefa tsy nahazo fahasambarana avy @'izany. Hoy izy hoe zava-poana ny zava-drehetra satria nisintaka avy t@ finoany an'i Jehovah.
Asa raha azonao ny tiako tenenina, tsy dia mahay manazava fihetseham-po aho, fa rehefa ao @ fiainanao Andriamanitra dia zary Paradisa ny tany, ary tsy misy tranga izay afaka manova an'izay. Jereo i Jôba, na nijaly toy inona aza dia nilaza izy hoe "fantatro fa velona ny Mpamonjy ahy".
Ka hoy aho hoe : inona fotsiny no dikan'ny fiainana raha tsy misy inona na inona aorian'ny fahafatesana afa-tsy ny fivadihana ho sakafon'ny kankana ? Tsy aleo ihany tonga dia mamono tena ? Ny tanjon'ny fiainana dia ny mahalala ny Mpahary antsika satria noforoniny ho Azy isika kanefa nisintaka t@ isika.
bandykely - 09/07/2013 15:15
Aminao ve izany fahasambarana = aorianan'ny fahafatesana?
Tsy midoroka aho fa kosa tsy maka ny baiboly ho repère. Ny baiboly amiko dia toy ny boky rehetra, voasoratry ny olona tamin'ny vanim-potoana iray. Tsy diso akory izay voalaza ao fa kosa efa vanin'andro hafa no iainantsika izao dia amiko, mila manaraka an'izay koa ny toe-tsaina fa tsy tavela tamin'ny taona 0 akory.
Tsy manakiana anao aho fa izay ny hevitro ary mety dia mety ny anao manaposaka izay heverinao ho fahamarinana.
Tsy misy firenena, na olona handroso raha mbola voafehy ao anaty ideolozia iray izy (fivavahana, politika,...).
Nehemiah - 09/07/2013 16:49
Tsy nilaza mihitsy aho hoe aorianan'ny fahafatesana ihany ny fahasambarana, fa tsy misy fahasambarana maharitra raha fahataperan'ny zava-drehetra ny fahafatesana.
bandykely Tsy midoroka aho fa kosa tsy maka ny baiboly ho repère. Ny baiboly amiko dia toy ny boky rehetra, voasoratry ny olona tamin'ny vanim-potoana iray. Tsy diso akory izay voalaza ao fa kosa efa vanin'andro hafa no iainantsika izao dia amiko, mila manaraka an'izay koa ny toe-tsaina fa tsy tavela tamin'ny taona 0 akory.
Kanefa mahavaly ny fanontaniana momba ny fiainana apetraky ny olona maro be ny tenany ankehitriny ity boky ity. Fa maninona kay ianao no tsy mino azy ?
bandykely Tsy manakiana anao aho fa izay ny hevitro ary mety dia mety ny anao manaposaka izay heverinao ho fahamarinana.
Torak'izay koa tsy ataoko tery vay manta mihitsy ny finoako fa velabelariko eto dia anjaranao ny manapa-kevitra raha mety ilay izy na tsia.
bandykely Tsy misy firenena, na olona handroso raha mbola voafehy ao anaty ideolozia iray izy (fivavahana, politika,...).
Ka tsy maintsy manana filôzôfia 1 anie ny olona sy ny firenena, izay no manavaka antsika @ biby, ka tsy dia any loatra ny olana fa ny fanontaniana dia hoe : inona no foto-pisainana hampandroso ny olona sy ny firenena ?
anjali - 10/07/2013 10:36
Inona no atao hoe sambatra? Raha @ maha nofo ny olombelona dia tsy mety ho afa-po mihitsy satria raha heverina fa mahasambatra ny vola oh, ka ananana betsaka io dia mety mahatsiaro sambatra vetivety ilay olona fa mety manana olana hafa izy tsy hahasambatra azy. Oh, ara-pahasalamana, tsy miteraka, mijaly am-panambadiana, sns...Ka io fisian'ny olana manelingelina ny tanjona iray tratra ka mety mahasambatra olona iray dia tsy hahalavorary io fahasambarany io.
@ maha fanahy ny olona kosa dia ny fiombonany tanteraka @ Andriamanitra no fototry ny fahasambarany ka hahatonga azy hahay hionona @ anjarany, ka ny fahafantarany fa miaraka aminy Andriamanitra na @ mora na @ sarotra dia ampy hahasambatra azy.
bandykely - 10/07/2013 11:01
Merci anjali...Ary ho anao manokana, inona izany izao ny tena fahasambaranao?
pisoonja - 10/07/2013 12:31
Ny fahasambarana dia samy manana ny azy mety ho sambatra ianao satria manan vady tia anao sns, fa mety ho sambatra ny sasany manana vola be na voninahitra
Sal 01 " Sambatra ny olona izay tsy mandeha @ fisainan'ny ratsy fanahy , ary tsy mandeha eo amin'ny lalàna falehan'ny mpanota , fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany "
anjali - 10/07/2013 14:34
Ny fahasambarako? Dieu seul
bandykely - 13/07/2013 15:18
Ary mba manao ahoana kosa ny hevitry ny hafa?
bor2lais - 13/07/2013 15:45
Raha araka an'Andriamanitra aloha dia ity raha ny Mat. 5 no jerena :
"3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan'ny lanitra.4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina;5 Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany (Sal.37.11).6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana.7 Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana.8 Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an' Andriamanitra.9 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak' Andriamanitra.10 Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra;11 Sambatra hianareo, raha haratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko."
Ka asa na mety aminao na tsia ?
bandykely - 15/07/2013 12:04
Misaotra namaly e...
Ny mahagaga ahy kely amin'ny valin'ny fanontaniana rehetra dia lasa orienté any amin'ny fivavahana daholo ny resaka rehetra.
Tsy sanatria akory manakiana fivavahana ny tenako, tsy izay mihitsy, fa milaza ny tendance hitako amin'ny réponse an'ny tsirairay aho.
Voafehy ao anatin'ny fivavahana ve ny fomba fijerintsika (ny idéal) ka tsy afaka hihoatra kely izany tokotany izany, na koa hoe haka recul kely hametra-panontaniana amin'ny tenantsika ka hivoaka izany cadre izany.
Averiko ihany fa tsy contre ny fivavahana aho akory fa kosa te-hanitikitika ny sain'ny tsirairay mba ho réaliste kokoa, mba ho rationnel ary mba ho objectif. Misokatra ny famoasan-kevitra e.
Nehemiah - 15/07/2013 14:46
Fivavahana inona kay izao ? Misy resaka lamesa na fandehanana any am-piangonana na fanaterana rakitra ve eo ? Tsia, resaka finoana (kristiana) no eto. Hafa mihitsy ireo 2 ireo.
Ny fivavahana dia ny olombelona no miezaka manao izay ankasitrahan'Andriamanitra, fa ny finoana dia Andriamanitra no nanao an'izay rehetra mba ho sitrany isika. Diso be anie ny hoe "Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany e" !
Tsy fantatro loatra ny an'ny finoana hafa aloha fa ny finoana kristiana dia rationnelle tanteraka. Sa misy antony mahatonga anao hieritreritra fa tsy marina izany ? Mba azonao velabelarina ve raha tsy mahadiso ?
bandykely - 15/07/2013 15:41
Merci Nehemiah amin'ny fandraisana anjara.
Tsy misy marina sy diso fa ny tsirairay dia samy manana ny lojika sy ny antony mahatonga azy hisafidy ny làlany. Tsy anjarako angamba ny hitsara hoe marina na diso, na koa hoe mety na tsy mety, fa ny anton'ny loha-hevitra dia ny hifanakalozana eo amin'ny fandraisan'ny tsirairay ny atao hoe fahasambarana (bonheur).
Raha ny hevitro indray dia tsy rationnel mihitsy ny foto-pisainana kristianina (averiko indray fa mino an'Andriamanitra aho, lehibe tanatin'ny finoana fa kosa mitsipaka tanteraka ny fametrahana ny fiainana aminy). Ny rationalité amiko dia fikatsahana ny tombotsoa betsaka indrindra ho an'ny tena arakarak'izay enti-manana misy. Ny lojika kristianina anefa dia tsy izany mihitsy:
- miaraha ory amin'izay ory,
- ampio ny tsy manana,
- arao ny baiboly,.....
Izany rehetra izany dia gaspillage de ressources ka tsy hanosika anao hiakatra, hahatratra izay tanjona kinasanao ka ho sambatra, fa kosa hisarika anao hidina hiara-hilentika amin'izay ory, mahantra,....
Ny tsirairay amiko no source an'ny bonheur-ny fa tsy Andriamanitra velively. Raha tafita aho dia izaho fa tsy Andriamanitra akory ary raha rendrika aho dia izaho ihany koa. Averiko, hevitro manokana izay. Ny baiboly dia toy ny coran any amin'ny firenena musulman, boky mirakitra tantara ka natao ho balise hahafahan'izay manaiky azy hanavaka ny tsara (tokony haleha) sy ny ratsy (tsy tokony haleha). Tahaka ny consitution izay mirakitra ny règle juridique, ny baiboly/coran dia mirakitra ny règle sociale.
Afaka mifanakalo hevitra foana fa mbola be dia be ny tiana lazaina
Farany, mandreraka be ahy ny maheno ilay firesaky ny olona eny an-dàlana, rehefa mitafa momba ny projet/vinavina tiana ho tanterahana, promotion eo amin'ny asa, réussite katsahina,....dia milaza hoe "ankinina amin'Andriamanitra e": ) Izay olona fantako moa dia valiko matetika hoe tsy ho azonao izany ny zavatra kinasanao satria ny tenanao aza tsy atokisanao. Kanefa tsy misy afa-tsy ny tenanao ihany no afaka hi-réaliser izay idéal anao. Andriamanitra dia tsy hanampy anao velively amin'izany rehefa tsy hihetsika ianao.